Naanị mkpuchi mkpuchi dị obere nke 1μm nwere ike ịghọta kpo oku mmadụ niile nwere ihu igwe - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd., Ltd.
Naanị mkpuchi mkpuchi dị obere nke 1μm nwere ike ịghọta kpo oku mmadụ niile nwere ihu igwe
Nọmalị, ahụ na -efunahụ ihe 50 pasent nke okpomọkụ ya site n'ichepụta ụzarị infrared dị n'etiti. Iji belata ọnwụ radieshon infrared, atụmatụ dị irè bụ ịhazigharị emissivity nke akwa na akwa, ka ị wee mara kpo oku radieshon (PRH) nke ahụ mmadụ. E jiri ya tụnyere usoro kpo oku ọdịnala, PRH nwere uru nke enweghị ike oriri, nke ziri ezi na ịrụ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, Ike mkpuchi PRH kachasị nwere oke na gburugburu ebe obibi, karịsịa n'ihe gbasara ehihie na abalị na ihu igwe na -agbanwe nke ukwuu, ọ na -esiri ike inweta ezigbo ọkụ nke ahụ mmadụ. Ya mere, mmepe nke ihe na sistemụ nwere ike kpoo ahụ mmadụ ọkụ n'ụzọ ziri ezi, ogologo ụbọchị dum, dị mkpa iji belata nsogbu ike na okpomoku zuru ụwa ọnụ.
Iji dozie nsogbu ndị a, ndị otu nyocha nke Mahadum Zhengzhou kọrọ atụmatụ atụmatụ ikpo ọkụ nkeonwe zuru oke nke ihu igwe niile: Ụdị kpo oku atọ, ya bụ PRH na -enweghị ike oriri, ike ịchekwa kpo oku anyanwụ na nkwụnye ọkụ Joule, etinyere nke ọma n'ime akwa Mxene /nanoPE akwa (12 μm) sistemụ site na mkpuchi mkpuchi mkpuchi Ti3C2Tx Mxmne (1 μm) na nanopore polyethylene dị ọnụ ala (nanoPE) akwa.
Na usoro nkwadebe, ndị nyocha ahụ buru ụzọ mezie akwa polydopamine (PDA) n'elu akwa nanoPE dị na ọnọdụ iji mepụta elu mmiri. A na-ejikwa akwa nanoPE gbanwere PDA naanị na ngwọta MXene iji mepụta akwa MXene/ nanoPE.. Usoro dị mfe, ga-ekwe omume ma dabara maka nkwadebe nke akwa textiles MXene/nanoPE.
Eserese eserese nke mbufe ọkụ akpụkpọ anụ mmadụ kpuchie ya na akwa MXene/nanoPE na usoro nkwadebe na njirimara MXene/nanoPE textiles.
Uwe akwa MXene/nanoPE abụghị naanị nwere ezigbo ụlọ PRH, kamakwa na -egosipụta oke ọkụ anwụ na -arụ ọrụ nke ọma (73.5℃) na kpo oku joule (55�℃ 5V) ike na ekele MXene dị ala n'etiti ikuku infrared, arụmọrụ ntụgharị ntụgharị photothermal dị elu na conductivity eletriki. Ọzọkwa, enwere ike gbanwee ma ọ bụ jikọta ụdị ọkụ ọkụ atọ, na -enyere textiles MXene/nanoPE aka ikpo ahụ mmadụ ọkụ nke ọma ụbọchị niile n'ọnọdụ dị iche iche.
Na mgbakwunye, textiles MXene/nanoPE enwetara na -egosikwa ọmarịcha wearable na yi ihe mgbochi, gụnyere ike n'ibu, ikuku permeability, ifufe na -eguzogide, ire ọkụ retardant, mkpuchi nnyonye aka nke electromagnetic, Njirimara antibacterial, ngwa ngwa ihicha Njirimara, wdg, na -eme ka ha bụrụ ezigbo ihe na sistemụ ndoro ndoro maka njikwa ọkụ ọkụ nke ahụ mmadụ n'ọdịnihu.
Ọrụ a na -eyi akwa nke akwa textiles MXene/nanPE
Ti3C2Tx Mxene nke Nanoporous Polyethylene nwere mma maka ikpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma E bipụtara ya na ACS Nano.
MEY na-ebupụta pajamas emere iji melite ogo ụra